आजको राष्ट्रियसभा बैठकमा सरकारको आलोचना » खबरहरुको एउटै केन्द्र
आजको राष्ट्रियसभा बैठकमा सरकारको आलोचना
शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ १३:३५ मा प्रकाशित !
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सरकार हुकुमी शासन संचालन गर्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको आरोप लगाएको छ। नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ट्राफिक प्रहरीलाई हुकुमी पाराले आदेश दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले उपत्यकाको सडक व्यवस्थापनको काम तत्काल गर्न पनि सरकारसँग जोडदार माग गरे। सांसद अधिकारीले मेलम्ची खानेपानीको नाममा काठमाडौं उपत्यकाको सडक अस्तव्यस्त बनाइएको भन्दै तत्काल उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद कविता बोगटीले तत्काल स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले सबै स्थानीय तहमा बैंक सेवा संचालन गर्न पनि सरकारसँग माग गरिन्।
सांसद रामप्रित पासवानले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको बेला सीमा अतिक्रमणका विषयमा कुरा नउठाएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताको कुरा गरिरहेपनि भारत सामू लम्पसार बनेको आरोप पनि लगाए।
सांसद कोमल ओलीले सरकारलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई छिटो सक्ने गरी बजेटको उचित व्यवस्था गर्न माग गरिन्। उनले बजेट एकीकृत विकास परियोजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याइन्। सांसद ओलीले जनताले सरकारबाट ठूलो अपेक्षा राखेको भन्दै सो अपेक्षा पूरा गर्न ढिलाई गर्न नहुनेमा पनि जोड दिइन्।
PREVIOUS POST Previous post: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सम्पत्ति तीन अर्ब
NEXT POST Next post: २५ प्रतिशत नेपालीमा उच्च रक्तचाप
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ १३:३५
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ १३:३५
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ १३:३५
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ १३:३५
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ १३:३५